भर्ने होइन त आँधिखोला लघुवित्तको आईपीओ ? आजबाट खुल्ला,कति गर्ने त लगानी ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
भर्ने होइन त आँधिखोला लघुवित्तको आईपीओ ? आजबाट खुल्ला,कति गर्ने त लगानी ?
अर्थ संसार, काठमाडौं–आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४ लाख कित्ता शेयर विक्री आज असार २२ गतेबाट खुल्ला गर्ने भएको छ।
सर्वसाधारणको लागि ३ लाख ७५ हजार, कर्मचारीका लागि ५ हजार र म्युचुअल फन्डको लागि २० हजार कित्ता प्राथमिक शेयर बिक्री खुला गर्न लागेको हो ।
सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम दुई हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले पहिलो चरणका लागि असार २५ गतेसम्म र पहिलो चरणमा बिक्री नभएमा ढिलोमा साउन २० गतेसम्म आवदेन खुला गर्ने जनाएको छ ।
आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इक्राले औसत आधारहरु जनाउने[ICRANP] IPO Grade4प्रदान गरेको थियो । ICRA Nepal ले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्दछ । जसमा ग्रेड १ ले बलियो आधारहरु जनाउँछ भने ग्रेड ५ ले कमजोर आधारहरु जनाउँछ ।
ग्रेड २, ३ र ४ मा प्रयोग गरिने (plus) चिन्हले त्यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाइ जनाउँदछ ।
कम्पनीको आधारहरु सम्बन्धी राय ब्यक्त गरीएका IPO Grade ले कुनै धितोपत्र खरिद, बिक्री तथा स्वामित्वमा राख्न सिफारिस गरेको जनाउदैन । साथै यो कुनै मूल्य निर्धारण वा सूचीकृत मूल्य बारेको टिप्पणी पनि होइन ।
पुँजी बजारमा लद्युवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा लगानीकर्ता झुमिएको देखिन्छ । कम कित्ता र लगानीकर्ताको आवेदन बढी पर्ने भएकाले न्यूनमत कित्ता मात्रै आवेदन दिए हुनेछ ।